Iinkqubo ze-Corsa android 8.0 zeemoto zemultimedia
Inkcazo:IiNkqubo zeMultimedia yeCorsa Car,Iinkqubo ze-Corsa Android zeMultimedia,Iinkqubo zeCorsa Multimedia
Home > Imveliso > I-Opel Imoto ye-Dvd ye-Android > Iinkqubo ze-Corsa android 8.0 zeemoto zemultimedia
Umzekelo No.: KD-8115
Packaging: ibhokisi yesipho
Sekiso: CE FCC
1.Steering wheel wheel plug zilungile, ukuthatha ulawulo lomculo wakho ngokukhuselekileyo ekuhambeni. Ngale imisebenzi, unokujolisa ngqo ngqo phambili, eya kwenza ukuqhuba ngokukhuselekileyo, iiCorsa android 8.0 iinkqubo zemultimedia yemoto , ixhasa iBlue-Enikwe amandla, eyakhelwe-kwi-GPS, Player Player, MP3.
Inkqubo ye-GPS eyakhelweyo eyakhelwe-ngaphakathi, exhasa i-TOMTOM, IGO8, ROUTE66, NAVITEL njl .Our Corsa android 8.0 Iinkqubo zemultimedia yeemoto zangaphambi kokubekwa kwezikhululo zerediyo ezingama-30. Yakhelwe kwi-AM / kwi-tuner ye-FM. Le nkqubo yeCorsa android 8.0 yeendlela zemultimedia isebenzisa ezona modyuli zerediyo zibalaseleyo ukuqinisekisa ukuba bonke abathengi banamava angcono.
I-3.I-Corsa ye-android 8.0 yeenkqubo zemoto zemultimedia iza ixhotywe ngezakhiwo eziluhlaza-izinyo kunye neefowuni zeencwadi. Ungayivumelanisa incwadi yeefowuni kwiselula yakho ukuya kwisitudiyo semoto emva koko wenze izandla simahla. Kananjalo uyakonwabela ukudlala umculo ngaphandle kwamacingo kwiindlela zakho zeCorsa android 8.0 zemultimedia.
4. Xhasa inqaku elixhumeka ngokulula: I-Corsa android 8.0 Iinkqubo zeemultimedia zemoto Iyahambelana nee-smartphones ze-android kunye nezixhobo, indawo edityaniswa ngokulula yenza ukuba kulawuleke phakathi kwe-smartphone yakho kunye neyunithi yemoto yentloko. Unokuqhagamshela ngokulula kwaye uvumelanise i-smartphone yakho kwi-uni nge-USB, ngaphandle kwesoftware eyongezelelweyo.
Iikhathalo zomkhiqizo : I-Opel Imoto ye-Dvd ye-Android
I-Android 7.1 Player dvd Player ye-Opel Insigina 2014-2015 Qhagamshelana Ngoku
ukuzonwabisa kwemoto ye-Astra J 2011-2014 Qhagamshelana Ngoku
Isandi semoto ngokuhamba nge-INSIGINA 2009-2012 Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo ze-Corsa android 8.0 zeemoto zemultimedia Qhagamshelana Ngoku
I-Corsa android 8.0 yentloko yentloko Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo ze-opel Corsa zeaudiyo zomsindo nge-navigation Qhagamshelana Ngoku
I-Windows 8.0 yemoto dvd gps ye-Astra J 2011-2014 Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo zestereo zemoto ze-Astra J ngo-2011/2014 Qhagamshelana Ngoku
IiNkqubo zeMultimedia yeCorsa Car Iinkqubo ze-Corsa Android zeMultimedia Iinkqubo zeCorsa Multimedia IiNkqubo zeMultimedia yeemoto Iinkqubo zeMultimedia zeC Cruiser IiNkqubo zeMultimedia yeTourneo Android Iinkqubo zeMultimedia zeeTouareg Iinkqubo zeMultimedia yeendlela